Lisitry ny mpanamboatra - Directory mpamatsy & mpamokatra - Alietc B2B
Na miasa amin'ny entana amboarina na fitaovana manta ianao, hiaraha-miasa amin'ny Tsena digital Alietc dia mety ho tsara ho an'ny fandraharahana ihany. Na ianao varotra amin'ny entana amin'ny mpanjifa toy kilalao, akanjo or lakozia, na fifampiraharahana amin'ny akora akora ohatra bauxite ary potash, hatramin'ny lamba ary plastika.
ao amin'ny Tsena B2B, ny mpamatsy dia mitoetra tokana tokana amin'ny tsy mitovy mpanamboatra iza no mivarotra ny vokany, na ny mpividy na ny vidiny ihany no mividy mpamatsy manaova roa, izay midika fa raha mpamatsy ianao dia avo roa heny mahasoa ho an'ny orinasanao i Alietc.
Ny fifalian'ny varotra amin'ny Alietc dia raha manana vokatra amidy ianao, hanampy anay hahita mpividy tena ianao izay hanantena anao hanomboka fiarahana maharitra sy mahasoa. Ny tanjonay dia ny hanao mitovy toa ireo vokatra hotadiavinao. Our B2B lampihazo dia nomanina tamim-pitandremana mba hahazoana antoka fa hihaona amin'ny fomba mahomby sy hahay tsara ny zavatra rehetra ilain'ny mpividy na mpivarotra.
Mba hanaovana izany, hanome anao ny fitaovana rehetra ilainao amin'ny rantsan-tananao ianao ary hanome torolàlana sy torohevitra betsaka aminao. Na mpivarotra za-draharaha ianao na efa eto amin'izao tontolo izao miasa amin'ny maha-mpamatsy anao, dia manolo-kevitra anao hamaky ny 'Mpanome torolàlana' ianao fa feno fampahalalana mahasoa hanampiana anao handany ny be indrindra amin'ny fotoana iarahanao. isika ao Alietc.
Indray mandeha dia nosoniavina ihany Alietc, avy eo ianao dia afaka mamorona ny mombamomba anao.
Miangavy fotoana kely hamoronana sary mivaingana mahaliana izay mety honaona amin'ireo mpanjifa na mpanjifa mety - namorona torolàlana mahasoa ho an'ny famoronana ny mombamomba anao Alietc izay azon'ny mpikambana ihany. Miaraka amin'ireo mpitari-dalana mpampiasa sarobidy hafa, ny torolàlana famoronana ny mombamomba anao dia hanampy anao hikapoka ny tany mihazakazaka ary hamonjy anao tsy handany fotoana tsy ilaina.
Atombohy ny fividianana na varotra!
Andao atombohy amin'ny zavatra ilainao raha toa ka manana vokatra amidy
Ankehitriny, ity no tokony hataonao raha manana lisitry ny vokatra tianao hovidina ianao.
Amin'ny maha mpividy azy:
Ny dingana voalohany ataonao dia ny mikaroka ireo vokatra tadiavinao ireo ary, satria ny zava-dehibe dia ho an'ireo mpanamboatra sy mpamatsy ireo vokatra ireo
Mandefasa fangatahana mividy vokatra. Azonao atao na mampiasa ny motera fikarohana mahery vaika izahay mba hahitana mpanamboatra na mpamatsy ny vokatra (tadiavinao) tadiavinao ary hametraka "fangatahana mividy vokatra"
Mametraka bida. Azonao atao ny mametraka tolotra momba ny vokatra rehetra voatanisa ho varotra eo amin'ny lampihazo Alietc
Handefasa fangatahana vokatra. Azonao atao ny mametraka fangatahana vokatra, izay hanaovanao mazava tsara ny vokatra (tadiavinao) hividianana sy izay vonona hiantoka azy ireo (izy ireo) - izay mpamatsy / mpamokatra rehetra afaka manome ny vokatra (na) vokatrao ianao hitady dia hahazo fampandrenesana eo noho eo ny fangatahan'ny vokatrao ary avy eo hanao fifandraisana raha ny vidiny tadiavinao no mahaliana azy ireo.
Ny fomba voalohany ataonao amin'ny mpamokatra / mpamatsy rehetra dia ho avy amin'ny Alietc mba hahafahantsika manamarina ny maha-fangatahana ny fangatahanao. Rehefa faly izahay fa tena mpandraharaha na olon-tokana ianao, dia halefa amin'ny mpanamboatra / mpamatsy ny fangatahanao, miaraka amin'ny antsipirian'ny fifandraisana, ary manomboka avy eo ianao dia afaka mifampiresaka mivantana.
Eto eto Alietc, zavatra iray nianarantsika tamin'ny voalohany dia ny zava-tsarotra indrindra mazàna dia vokatry ny fifampiraharahana. Ity indrindra dia ny zava-misy izay misy be dia be na mety ho fananana baikoina averimberina matetika. Betsaka ny zavatra tokony hojerena tsara rehefa tafiditra ao anaty fifampiraharahana momba ny fifanarahana.
Amin'ny maha mpivarotra:
Ny dingana voalohany ataonao dia ny lisitry ny vokatra anananao amidy ary manasa ireo tolotra avy amin'ireo mpividy mahay sy vonona. Azonao atao ny manisy lisitra ny vokatra amin'ny vidiny voarindra raha misafidy araka izany ianao.
Faharoa, azonao atao ny mikaroka ny angona mombamomba anay ho an'ireo mpikambana izay te hividy ny vokatra anananao, na ireo nividy ireo, na vokatra mitovy toa izany taloha. Azonao atao ny mandefa ny vidiny izay ahafahanao manome ny vokatra (t) tadiaviny.
Alietc - Mihoatra lavitra noho ny tsena nomerika
Products: rafitra varavarana mivalona, ​​savony showeroom, tantanana misintona, rafitra varavarana mihetsiketsika, fantsom-bozaka sy fantsom-by
B&G Sports Goods Co., voafetra
Products: Vajilla, vajilla, mpamokatra s silicona, mpamokatra vidéo, juego de té
Products: Fonosana mangatsiaka mafana, fonosana mangatsiaka eo noho eo, fonosana mafana, fonosana gilasy, fonosana Hydrogel
Products: Masinina fanadiovana karbaona an'ny motera HHO, milina fantsom-bozaka HHO, milina fanapahana oxyhydrogen, generator hho, mpamokatra oxyhydrogen
Products: tarihin'ny hitombo hazavana, taratra hazavana, switch wifi, mpamily tarika, kitapo hitombo
Products: paty, lafarinina, siramamy voadio, siramamy granulated, ranom-boankazo
BAHIA HO AN'NY FANAMPIM-PANAVOTANA SY NY FITSIPAZANA ARY NY TRADING GENERAL LTD CO
Products: marika tany am-boalohany nampiasa finday, telefaona finday, iphone ipad, samsung HTC blackberry, sony moto nokia lg cell phone
Baichy Heavy Industrial Machining Co., Ltd.
Products: Fanomezam-pahasoavana & asa tanana, haingon-trano haingon-trano, boaty firavaka, boaty trinket, fanomezana ho an'ny mariazy
Products: Mamatotra fehy sy tadin'ny Bungee